Iyo iPhone ine 5G haizosvika kusvika muna 2021 nekuda kwekukanganiswa kweiyo coronavirus | IPhone nhau
Zvekare zvakare, tinodzokorora nhau ine hukama nekoronavirus inofara iyo yakativharira mudzimba dzedu kwemazuva mashoma uye izvo zviri kukanganisa, kwete chete mune zvehupfumi, makambani, asi zvakare, sekureva kwevamwe vaongorori, kune kuvhurwa kwezvigadzirwa zvitsva.
Kune runyerekupe rwakawanda kuti gore rino, Apple ichatangisa iyo yekutanga iPhone inoenderana ne5G network kana isingade kuve chinongedzo chekushoropodzwa kubva kune vese vashandisi uye vezvenhau. Vamwe vaongorori vanoti nekuda kwekukanganisa kwecoronavirus kutenderera pasirese, kunyanya kuChina, Apple inogona kusatangisa tekinoroji ye5G pane iPhones gore rino.
Uye ini ndinoti icho chichava chinhu chekushoropodzwa kubva kune vazhinji vashandisi uye midhiya, nekuti havasi vese vanoshandura yavo iPhone gore rega. Vazhinji vashandisi vanochengeta iyo iPhone kwemakore maviri, matatu kana kunyange mana. Kana gore rino, ikasavhura modhi inoenderana ne2G network, zvingangoita kuti vazhinji vevashandisi vanoronga kuvandudza yavo iPhone havazozviita uye kumirira inotevera.
Mumwe muongorori paWedbush anoti:
Apple haizovhura iPhone ne5G tekinoroji muna 2020 nekuda kwekuvharirwa kwekutengeswa uko kwakawanda kutengeswa kwemaketani muAsia parizvino kuri kutambura, uye kuti kuimisikidzwa kwayo kuchiri kutora mwedzi mishoma, saka Apple haizove nenguva yakakwana yekushandisa iyi chip chip kunze kwekunge kuvhurwa kwePhones nyowani kuchinonoka. Iyo nguva uye chiyero cheiyo coronavirus kukanganisa kutenderera pasirese hakugone kufanofungidzirwa izvozvi, zvirinani mune zvazvino mamiriro.
Vaongorori vanotarisira kuvhurwa kweiyo iPhone inoenderana ne5G network gadzira rekodhi rekambani kutengesa, yakafanana neyakaonekwa neApple payakatangisa iyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 12 » Iyo iPhone ine 5G haizosvika kusvika muna 2021 nekuda kwekukanganisa kwecoronavirus
Nezviziviso izvi, Apple yakaunza iyo nyowani iPad Pro